Combatte - Italiaans - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: combatte (Italiaans - Burmees)
ထိုသူတို့ကို မကြောက်နှင့်။ ငါ၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင့်ဘက်၌ စစ်ကူတော်မူမည်ဟု ငါမှာထားလေ၏။
ကိုယ်တော်၏ ကျွန်မအပြစ်ကိုသည်းခံတော်မူပါ။ ကျွန်မသခင်သည် ထာဝရဘုရားဘက်မှာ စစ်တိုက်သောကြောင့်၎င်း၊ တသက်လုံးကိုယ်တော်၌အပြစ်တင်စရာ အခွင့်မရှိသောကြောင့်၎င်း၊ ထာဝရဘုရားသည် ကျွန်မ၏သခင်အဘို့ ခိုင်ခံ့ မြဲမြံသော အိမ်ကို တည်ဆောက်တော်မူလိမ့်မည်။
combatti dei mostri diabolici con le tue armi magiche.
အဘိမလက်သည် တနေ့လုံးမြို့ကို တိုက်၍ရသောအခါ၊ မြို့၌ တွေ့သောသူတို့ကို သတ်ပြီးလျှင် မြို့ရိုးကို ဖြိုဖျက်၍ မြို့ရာကို ဆားနှင့် ကြဲဖြန့်လေ၏။
poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; colui che lo cavalcava si chiamava «fedele»e«verace»: egli giudicaecombatte con giustizia
frenò le ruote dei loro carri, così cheastento riuscivanoaspingerle. allora gli egiziani dissero: «fuggiamo di fronteaisraele, perché il signore combatte per loro contro gli egiziani!»
သူတို့ရထား အသွားခက်စေခြင်းငှာ ရထားဘီးများကို ချို့တဲ့စေတော်မူ၏။ အဲဂုတ္တုလူတို့ကလည်း၊ ဣသရေလလူတို့ထံမှ ပြေးကြစို့။ ထာဝရဘုရားသည် သူတို့ဘက်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့တဘက်၌ စစ်တိုက်သည်ဟု ပြောဆိုကြ၏။
ရှိဟုန်သည် ဣသရေလအမျိုးကို မယုံ၊ မိမိပြည်ကို ရှောက်သွားစေခြင်းငှါ အခွင့်မပေးသည်သာမက၊ မိမိလူအပေါင်းတို့ကို စုဝေးစေ၍၊ ယာဟတ်မြို့၌ တပ်ချပြီးလျှင် ဣသရေလအမျိုးကို စစ်တိုက်လေ၏။
ထာဝရဘုရားသည်လည်း စစ်တိုက်ရာကာလ၌ တိုက်သကဲ့သို့၊ ထိုလူမျိုးတို့ကို တိုက်သွားတော်မူမည်။
ငါ့သားတိမောသေ၊ သင့်ကိုရည်မှတ်၍ ဟောပြောခဲ့ပြီးသော အနာဂတ္တိစကားကို သင်သည်အမှီပြု၍၊ ယုံကြည်ခြင်းကို၎င်း၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသော စိတ်ကြည်လင်ခြင်းကို၎င်း စွဲလမ်း၍ ကောင်းသောစစ်ကို တိုက်စေ ခြင်းငှါ၊ ထားခဲ့ပြီးသော ထိုအနာဂတ္တိစကားနှင့်အညီ၊ အထက် ငါဆိုခဲ့ပြီးသော ပညတ်ထားခြင်းအခွင့်ကိုသင်၌ ငါအပ်ပေး၏။
allora zebul gli disse: «dov'è ora la spavalderia di quando dicevi: chi è abimèlech, perché dobbiamo servirlo? non è questo il popolo che disprezzavi? ora esci in campoecombatti contro di lui!»
ဇေဗုလက၊ ငါတို့သည် အဘိမလက်အမှုကို ထမ်းရမည်အကြောင်း၊ အဘိမလက်သည် အဘယ်သူနည်းဟု သင်ဆိုသော နှုတ်သည် ယခုအဘယ်မှာ ရှိသနည်း။ ထိုလူတို့သည် သင်မထီမဲ့မြင်ပြုသော သူမဟုတ်လော။ ထွက်၍ သူတို့ကို စစ်တိုက်ပါလော့ဟု ဆိုသော်၊
တံပိုးမှုတ်၍ လူများတို့သည် ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကို မလိုက်၊ စစ်မတိုက်ဘဲရပ်နေကြ၏။
milf hunter (Engels>Russisch)escribe aqu铆 tu mensaje: (Spaans>Engels)hindi gumana (Tagalog>Engels)kalalabas ko lang sa hospital (Tagalog>Engels)aerosolerzeugung (Duits>Engels)découverte de la fondationd(Frans>Engels)alphanumeric keys (Engels>Tagalog)सेक्सी वीडियो नंगा (Hindi>Engels)but don't tell my dad i said that (Engels>Italiaans)gusto kong pumunta sa ibang bansa (Tagalog>Engels)galvanizate (Roemeens>Engels)guten morgen (Duits>Tagalog)main kutte ko khilata hu (Hindi>Engels)vrachtboten (Nederlands>Frans)liberium arbitrium (Latijn>Engels)för2timmar sedan (Zweeds>Engels)pilipinong salita na nagtatapos sa letrang m (Tagalog>Engels)sana chat tayo (Engels>Tagalog)pens (Engels>Bosnisch)bega (Noors>Engels)berbagi pengalaman (Indonesisch>Engels)nesubvencovaného (Slovaaks>Maltees)vacant (Engels>Maleis)tukar rumi ke arab (Maleis>Arabisch)